Miyaan isku qasnaa ereyada marka qabow qabow jiro? | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | | Hirar qabow
Isbaanishka waxaan ku dhibtoonay mowjado qabow oo asal ahaan ka soo jeeda Sibiriya oo ka dhaca dhamaan jasiiradda, marka laga reebo jasiiradaha Canary. Waxaan ahayn welina beelo badan oo ismaamulada ayaa wali ah heegan ugu jira heerkulka hooseeya, roobabka culus iyo dabeylaha.
Durante hirarka qabow Waxaa jira siyaabo badan oo lagu sharxo ama loogu gudbiyo qabow, laakiin khubarada saadaasha hawadu waxay adeegsadaan xoogaa jargon ah oo laga yaabo inaynaan si fiican u fahmin. Waa maxay ereyada loo adeegsado sixirka qabow?
1 Maxay ka dhigan tahay marka qabow qabow gaaro heerkiisa ugu sarreeya?
2 Ka jar eber ka hooseeya
3 Xagee qabowgu ka yimaadaa?
4 La qaboojiyey
5 Dharka kuleylka ah iyo dharka kuleylka
6 Hargab qabow
7 Qor qabow iyo baraf ama qabow iyo baraf
Maxay ka dhigan tahay marka qabow qabow gaaro heerkiisa ugu sarreeya?
In mowjad qabow ay gaarto heerkeeda ugu sarreysa waxay u dhigantaa inay gaarto meesha ugu qabow, taas oo ah, marka heer-kul-kulmeeyayaashu ay muujinayaan heer-kulka ugu hooseeya ee mowjadda qabow oo dhan. Micnaheedu maahan oo keliya in mowjadda qabowgu ay gaarto ugu yaraan heerkulka, laakiin ugu sarreysa sidoo kale waxaa loola jeedaa xilliga ay ku jirto muhiimadda ama ugu dambeynta qaar ka mid ah geeddi-socodka jirka, habka dabiiciga ah, iwm.
Ka jar eber ka hooseeya
Badanaa dadku way la yaabaan marka heerkulbeegyadu gaaraan heerkulka barafka. Maaddaama aysan caado u ahayn inay hoos u dhacaan, muujinta sida "waxaa jira heerkul ka hooseeya eber" ayaa ah amarka maalinta. Erayadayada Isbaanishka ka sokow, waxaan marar badan ka maqalnaa warbaahinta. Sidan oo kale, waxaan ku wareersanahay eraybixinta. Waana in heer kulku uu yahay darajo taban ama ka hooseeya eber, laakiin labadaba maahan.
Xagee qabowgu ka yimaadaa?
Had iyo jeer waxaa la yiraahdaa marka ay dhab ahaan qabow tahay, waa qabow daran. Taasi waa, qabowgu wuxuu noogu yimaadaa dabaysha ka socota cirifka woqooyi. Si kastaba ha noqotee, mowjadaha qabow iyo kuwa qabow had iyo goor kama soo baxaan tiirarka. Mararka qaarkood waxay ka yimaadaan Siberia, marna waxay ka yimaadaan jaranjarooyinka, iwm. Laakiin Isbaanishka had iyo jeer waxay u noqon doontaa qabow daran.
Waa mid ka mid ah muujinta caadiga ah ee dadku markay soo galayaan shaqada ama makhaayadda. Waxaan la qaboojinayaa qabow. Waa weedh tilmaamaysa qabow daran oo uu "layaabay". Dareenkani waa mid aad u badan marka heerkulku aad hoos ugu dhaco.
Dharka kuleylka ah iyo dharka kuleylka
Sidoo kale maalmaha qabow raadinta internetka ayaa sii kordheysa sida loo kululeeyo gurigaaga, u keydso kuleylka oo si fiican u xir xirmo si looga fogaado in hargab ku dhaco. Waxa ugu muhiimsani waa in la raadsado dhar si heer kul ah nooga ilaaliya qabowga si aan ugu raaxaysano sida ugu macquulsan wadada iyo guriga. Dharka naga dhigaya inaan iska ilaalino la xiriirida qabowga waa dharka kuleylka, taas oo ah, sharaabaadyo, hoosta, gacmo gashi, jaakado, iwm. Laakiin maskaxda ku hay inay tahay dharka "kuleylka leh" ee aysan ahayn dharka "kuleylka". Dharka kuleylka waa dharka inaga ilaaliya qabowga, laakiin ereyga kuleylka waxaa loola jeedaa wax kasta oo la xiriira ilo biyo kulul. Ha ku jahwareerin, laakiin, dharka dharka kulul ee google, si aad u aragto waxaad hesho.
Si la mid ah kuleylka iyo kuleylka iyo qaboobaha, waxaan u janjeersanahay inaan isku jahwareerno ereyada "glacial" iyo "glacier". Warar badan waxaan ku aragnaa oraahda "qabow daran." Si kastaba ha noqotee, barafku wuxuu loola jeedaa wax kasta oo la xiriira baraf-barafka iyo barafka isku urursada meel ka sarreeysa xadka barafka weligiis ah. In kasta oo barafku yahay waxayaga, 'heerkul aad u qabow' ama 'taas oo ka dhigaysa baraf ama qabow'.
Qor qabow iyo baraf ama qabow iyo baraf
Badanaa waxaa la yiraahdaa waqtiga qorista mawjad qabow iyo baraf. Si kastaba ha noqotee, sida saxda ah ee loo dhigo waa qabow qabow iyo baraf. Thanks to diphthong hie, muhiim maahan in loo dhigo e isku xirnaanta. Had iyo jeer waxaa jira kuwa cadeynaya in sheygu uusan sidaa uxuneyn, in kani uusan aheyn qabow ama gla gla ama polar ama wax, in uu yahay wax yar oo qabow, sida wax yar, ku dhowaad friito, waxaan dhihi karnaa, ama fricito, kuwaas oo ah cabirka magacan, oo aan si isdaba joog ah naloo weyddiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Hirar qabow » Miyaan isku qasnaa ereyada marka qabow qabow jiro?
Trump iyo golihiisa wasiirrada ayaa tirtiray dhammaan tixraacyada isbeddelka cimilada iyo kuleylka adduunka bogga rasmiga ah ee Aqalka Cad
Kulaylka adduunku wuxuu goyn karaa maalmo heer kul ah